प्रचण्ड सरकारको तीन महिना पूरा : तर काम सबै अधुरा !::mirmireonline.com
प्रचण्ड सरकारको तीन महिना पूरा : तर काम सबै अधुरा !
काठमाण्डौं कार्तिक २० । काग्रेसको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना पुरा भएको छ । तर यो तीन महिनामा के के उपलव्धि भयो भनेर कसैले हिशाब गरेको छैन । यद्यपि धेरै नेताहरुको प्रतिकृया छ तीन महिना उपलव्धि हीन रह्यो ।
साउन १९ गते निर्वाचीत भएर २० गते शपथ खाएका प्रधानमन्त्री दाहालले अझै सम्म मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन ।
यसै गरी संविधान कार्यन्वयन गर्ने र मधेशवादी दलको माग संवोधन गर्न सविधान ससोधन गर्ने सहमति भए पनि अहिले सम्म संसदमा त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता समेत हुन सकेको छैन ।
संविधान कार्यन्वयन लागि अनिवार्य शर्त जस्तो देखिएको तीन वटै संरचनाको निर्वाचनको मिति समेत सरकारले तोक्न सकेको छैन ।
त्यस बाहेक भारत भ्रमण, भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई नेपाल भ्रमण गराउन सफल हुनु जस्ता कुरालाई सरकारले उपलव्धिको सूचीमा राख्न सक्ने देखिएको छ ।
भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणका सिलसिलामा समेत सार्वजनिक विदा दिएर सरकार चौतर्फी आलोचनाको शिकार भएको छ ।
त्यसै गरी असोज अन्तिम साता हुने भनिएको चीनीया राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन नसक्नु सन्तुलित कुटनीतिक भूमिकाको नाममा गलत कुटनीतिक कदमहरु चालिएको जस्ता विषयमा सरकारको यस क्षेत्रका जानकारबाट समेत आलोचना भएको छ ।
काग्रेस र माओवादीबीच भएको सात बुदे सहमति अनुसार पनि अब सरकारको आयु ६ महिना मात्र बाकी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल पहिलो पटक २०६५ सालमा ९ महिना प्रधानमन्त्री भएका बेला अनुभवको कमी भएको र अब दोस्रो पटक धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने पार्टी र समर्थकहरुको अपेक्षा विपरीत दाहालले विस्तारै विस्वास गुमाउदै गएको भन्दै पार्टी भित्रै समेत आलोचना भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यले राष्ट्रियताका सवालमा केही प्रतिकृल जस्ता देखिने भारतसग‘को २५ बुदे सयुक्त विज्ञप्ति, मुखर्जी भ्रमणको बेला सा्र्वजनिक विदा जस्ता कुराले राष्ट्रियतामाथि माओवादीको अडानमा प्रश्न उठेको प्रतिकृया दिएका छन् ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै मन्त्रीहरुलाई बोलाएर किन राम्रो काम हुन सकेन ? भन्दै गुनासो गर्नु भएको खबर बाहिर सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आजदेखि चीन भ्रमण गर्दै, भोलीबाट उच्चस्तरीय भेटवार्ता